Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres's Nelson Mandela Cashar Sanadeedka 2020 - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Xoghayaha guud ee qaramada midoobay António Guterres casharkii sanadlaha ahaa ee Nelson Mandela 2020
August 20, 2020 Warar & Muuqaal 0
Xoghayaha guud ee qaramada midoobay António Guterres ayaa muxaadaradii sanadlaha ahayd ee Nelson Mandela ka jeediya Magaalada New York. (Sawir: Aasaaskii Nelson Mandela)
(Waxaa daabacay: Nelson Mandela Foundation, Luulyo 18, 2020)
Hordhaca Tifatirayaasha. Qandaraaska cusub ee bulshada ee Guterres iyo talo soo jeedinta ah in la sii wado Heshiiska Cusub ee Caalamiga ah ee u baahan "qaybinta awooda, hantida iyo fursadaha" waxay xasuusinaysaa qoraallada kale ee ku jira Xiriirada Corona taxane ku baaqaya "caadi cusub". Xoghayaha guud wuxuu sii wadaa inuu soo jeediyo in "qaab cusub oo loo maro dowladnimada adduunka waa inuu ku saleysnaadaa ka qaybgal buuxa, loo dhan yahay oo loo siman yahay hay'adaha adduunka." Waxaan ku dhiiri galinaynaa barayaasha nabada inay raacaan hogaaminta Guterres iyo inay horumariyaan su'aalo si loo sii baaro fursadaha maamulka caalamiga ah ee aadanaha.
Kani waa qoraalka buuxa ee Khudbadda Sannadlaha ah ee Nelson Mandela Khudbadda Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres 2020. Taxanaha Muxaadarooyinka Sanadlaha ah ee Nelson Mandela, oo ah hindisaha Mu'asasada Nelson Mandela, wuxuu ku martiqaadayaa dadka caanka ah inay kaxeeyaan doodaha arrimaha muhiimka ah ee bulshada.
Wax ka qabashada Faafaada Faa'iido la'aanta: Qandaraas Bulsheed Cusub oo Waagaa Cusub
New York, 18 Luulyo 2020
Sharaf, marti sharaf, asxaab,
Waa sharaf in aan kugula soo biiro adiga oo sharfaya Nelson Mandela, hoggaamiye aan caadi ahayn oo caalami ah, u doodid, iyo ku dayasho mudan.
Waxaan uga mahadcelinayaa Hay'adda Nelson Mandela Foundation fursaddan oo aan ku ammaanayaa shaqadooda si ay himiladiisa u sii noolaato. Waxaanan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoyskii Mandela, iyo dawladda iyo dadka Koonfur Afrika, geeridii ku timid Danjire Zindzi Mandela horaantii toddobaadkan. Iyadu ha ku nasato.
Waxaan nasiib u yeeshay inaan la kulmo Nelson Mandela dhowr jeer. Weligay ma hilmaami doono xigmaddiisa, go’aan qaadashadiisa iyo naxariistiisa, ee ka dhex iftiimisay wax kasta oo uu yidhi iyo wax kasta oo uu qabanayay.
Bishii Ogosto ee la soo dhaafay, ciidahayga, waxaan booqday qolka Madiba ee ku yaal Jasiiradda Robben. Waan istaagay, anigoo baararka fiirinaya, waxaan markale hoos ugu degay xoogiisa maskaxeed iyo geesinimadiisa aan lasoo koobi karin. Nelson Mandela wuxuu ku qaatay 27 sano oo xabsi ah, 18 ka mid ah wuxuu ku qaatay jasiiradda Robben. Laakiin isagu weligiis uma oggolaan waayo-aragnimadan inuu qeexo isaga ama noloshiisa.
Nelson Mandela wuxuu ka kor maray xabsiyadiisa si uu u xoreeyo malaayiin reer Koonfur Afrika ah isla markaana uu u noqdo dhiirigelin caalami ah iyo astaan ​​casri ah.
Wuxuu naftiisa u huray inuu la dagaallamo sinnaan la'aanta gaareysa heerarka dhibaatada adduunka oo dhan sannadihii la soo dhaafay - taasna waxay khatar weyn ku tahay mustaqbalkeenna.
COVID-19 ayaa tooshka ku ifinaysa cadaalad darradan.
Maanta, dhalashada Madiba, waxaan ka hadli doonaa sida aan wax uga qaban karno dhinacyada badan ee is-xoojinaya iyo lakabyada sinnaan la'aanta, ka hor inta aysan burburin dhaqaalaheenna iyo bulshooyinka.
Saaxiibada qiimaha badan,
Adduunku qas buu ku jiraa. Dhaqaalaha ayaa ku jira hoos u dhac.
Waxaa naloo keenay jilbaha - oo uu keenay fayras yar.
Aafadu waxay muujisay jilicsanaanta adduunkeenna.
Waxay soo saartay khataro qaawan oo aan iska indhatirnay tobanaan sano: nidaamyo caafimaad oo aan ku filnayn; nusqaamaha ilaalinta bulshada; sinaan la'aanta qaabdhismeedka; xaalufinta deegaanka; dhibaatada cimilada.
Gobollada horumarka ka sameynayay ciribtirka saboolnimada iyo yaraynta sinaan la'aanta ayaa dib loo dhigay sannado, bilo gudahood.
Feyrasku wuxuu halista ugu badan ku hayaa kuwa ugu nugul: kuwa ku nool saboolnimada, dadka da'da ah, iyo dadka naafada ah iyo xaaladaha horay u jiray.
Shaqaalaha caafimaadka ayaa ku sugan jiidaha hore, iyadoo in ka badan 4,000 uu ku dhacay dalka Koonfur Afrika oo keliya. Waxaan ku amaanayaa iyaga.
Wadamada qaarkood, sinaan la'aanta caafimaadka ayaa la kordhiyay iyadoo kaliya aysan aheyn cosbitaalada gaarka loo leeyahay, laakiin ganacsiyada iyo xitaa shaqsiyaadka ayaa keydsanaya qalab qaali ah oo si deg deg ah loogu baahan yahay qof walba - tusaale naxdin leh oo ah sinaan la'aanta isbitaalada dowlada.
Hoos u dhaca dhaqaale ee aafada ayaa saameynaya kuwa ka shaqeeya dhaqaalaha aan rasmiga ahayn; ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah; iyo dadka leh masuuliyadaha daryeelka, kuwaas oo u badan haween.
Waxaan wajahaynaa hoos u dhacii ugu xumaa adduunka tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka, iyo burburkii ugu ballaarnaa ee soo gala ilaa 1870.
Boqol milyan oo qof oo dheeraad ah ayaa lagu riixi karaa saboolnimo ba'an. Waxaan arki karnay macaluul saamiga taariikhi ah.
COVID-19 waxaa loo ekeysiiyay raajo, muujinta jabka ku jira qalfoofka jilicsan ee bulshooyinka aan dhisnay.
Waxay soo bandhigaysaa khaladaadka iyo beenta meel kasta:
Beenta ah in suuqyada xorta ahi ay daryeel caafimaad u wada gaarsiin karaan dhammaan;
Khayaaliga ah in daryeelka daryeelka aan la bixin uusan shaqeynin;
Dhalanteedka ah in aan ku nool nahay adduun cunsuriyad kadib;
Khuraafaadka ah in aan kulligeen doon isku wada nahay.
Sababtoo ah inta aan wada dul sabeyneyno isku bad, waxaa iska cad in qaarkeen ay ku jiraan superyachts halka qaar kalena ay ku dhegan yihiin qashin sabeynta.
Sinaan la'aantu waxay qeexaysaa waqtigeenna.
In ka badan boqolkiiba 70 dadka adduunka waxay la nool yihiin dakhli koraya iyo sinnaan la'aanta hantida. 26-ka qof ee adduunka ugu taajirsan ayaa haysta hanti aad u tiro badan oo ah kala bar dadka adduunka.
Laakiin dakhliga, mushaharka iyo hantida ma aha halbeegyada kaliya ee sinaan la'aanta. Fursadaha nololeed ee dadku waxay kuxiran yihiin jinsigooda, qoyskooda iyo asalka ay ka soo jeedaan, jinsiyadooda, inay naafo yihiin iyo in kale, iyo arrimo kale. Sinaan la'aanta badan ayaa is dhex gasha oo xoojisa midba midka kale jiilalka. Nolosha iyo rajooyinka malaayiin qof ayaa inta badan lagu go'aamiyaa duruufaha ay ku nool yihiin.
Sidan oo kale, sinnaan la'aantu waxay u shaqeysaa ka soo horjeedka horumarka aadanaha - qof walba. Dhamaanteen waan la kulanay cawaaqibkeeda.
Mararka qaar waxaa naloo sheegaa in kor u kaca koritaanka dhaqaalaha uu qaadayo doonyaha oo dhan.
Laakiin dhab ahaan, sinnaan la'aanta sii kordheysa ayaa quusaysa dhammaan doomaha.
Heerarka sare ee sinaan la'aanta waxay laxiriiraan xasillooni darro dhaqaale, musuqmaasuq, qalalaase dhaqaale, dembiyo badan iyo caafimaadka jirka iyo maskaxda oo liita.
Takoorida, xadgudubka iyo helitaanka cadaalada ayaa qeexaya sinaan la'aanta dad badan, gaar ahaan dadka asaliga ah, muhaajiriinta, qaxootiga iyo dadka laga tirada badan yahay nooc kasta. Sinaan la'aanta noocan oo kale ah waxay si toos ah u weeraraysaa xuquuqda aadanaha.
Wax ka qabashada sinnaan la'aantu waxay ahayd dariiqa dhaqaajiya taariikhda oo dhan cadaaladda bulshada, xuquuqda shaqaalaha iyo sinnaanta jinsiga.
Aragtida iyo ballanqaadka Qaramada Midoobay ayaa ah in cuntada, daryeelka caafimaadka, biyaha iyo fayadhowrka, waxbarashada, shaqada hufan iyo amniga bulshada aysan ahayn badeecado laga iibinayo kuwa awood u leh, laakiin ay tahay xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha oo aan dhammaanteen xaq u leenahay.
Waxaan ka shaqeyneynaa yareynta sinnaan la'aanta, maalin kasta, meel kasta.
Dalalka soo koraya iyo kuwa horumarayba, waxaan si nidaamsan u daba-galnaa oo aan taageernaa siyaasadaha si aan u beddelno firfircoonaanta awoodda ee salka ku haysa sinnaan la'aanta shaqsi, bulsho iyo heer caalami.
Aragtidaasi waxay maanta muhiim u tahay sidii ay ahayd 75 sano ka hor.
Waxay udub dhexaad u tahay Ajendaha 2030 ee Hormarinta Waara, qorshaheena lagu heshiiyey ee nabadda iyo barwaaqada ee meeraha caafimaadka qaba, waxaana lagu qabtay SDG 10: in la yareeyo sinaan la'aanta ka dhex jirta iyo inta u dhaxeysa dalalka.
Xitaa kahor faafida COVID-19, dad badan oo adduunka ah waxay fahmeen in sinaan la'aantu ay wiiqeyso fursadaha noloshooda iyo fursadaha.
Waxay arkeen adduun isku dheelitiran.
Waxay dareemeen in laga tegey.
Waxay arkeen siyaasadaha dhaqaalaha ee u gudbinaya ilaha kor u kaca kuwa yar ee mudnaanta leh.
Malaayiin dad ah oo ka kala yimid qaaradaha oo dhan ayaa isugu soo baxay jidadka si codkooda loo maqlo.
Sinaan la'aanta sareysa iyo tan soo koraysa waxay ahayd cunsur caadi ah.
Cadhada quudinta laba dhaqdhaqaaq bulsheed ee dhowaa waxay ka turjumaysaa jahwareer buuxa oo imika taagan.
Haweenka meelkasta oo ay joogaan waxay ugu yeereen waqti mid ka mid ah tusaalooyinka ugu xun ee sinaan la'aanta jinsiga: rabshadaha ay ku kacayaan ragga awooda leh ee haweenka ka soo horjeeda kuwaas oo si fudud isku dayaya inay shaqooyinkooda qabsadaan.
Dhaqdhaqaaqa cunsuriyada ka soo horjeedka ee ka faafay Mareykanka adduunka oo dhan wixii ka dambeeyay dilkii George Floyd waa hal calaamad oo dheeraad ah oo dadku ku filan yihiin:
Ku filan sinaan la’aan iyo takoorid loola dhaqmo dadka sida dambiilayaasha iyadoo lagu saleynayo midabkooda maqaarka;
Ku filan cunsuriyada qaabdhismeedka iyo cadaalad darada nidaamsan ee dadka u diidaysa xuquuqdooda aasaasiga ah ee aadanaha.
Dhaqdhaqaaqyadani waxay tilmaamayaan laba ka mid ah ilaha taariikhiga ah ee sinnaan la’aanta ka jirta adduunkeenna: gumeysi iyo awoowe.
Waqooyiga Caalamiga ah, gaar ahaan qaaradda aan ka soo jeedo ee Yurub, waxay xukunno gumaysi ah ku soo rogtay inta badan Koonfurta Adduunka qarniyo badan, iyada oo loo marayo rabshad iyo khasab.
Gumeysiga wuxuu abuuray sinaan la’aan ballaaran gudaha iyo udhaxeysa wadamada, oo ay kujiraan xumaanta ganacsiga addoomiga Transatlantic iyo xukunkii midab kala sooca halkan Koonfur Afrika.
Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, abuuritaanka Qaramada Midoobay wuxuu ku saleysnaa heshiis cusub oo caalami ah oo ku saabsan sinnaanta iyo sharafta aadanaha.
Mowjad gumaysi ahna wuu xaaqay adduunka.
Laakiin yeynaan iskhiyaanayn.
Dhaxal gumeysiga ayaa wali soo ifbaxaya.
Waxaan ku aragnaa tan cadaalad daro dhaqaale iyo mid bulsho, kororka dambiyada nacaybka iyo ajnabi nacaybka; ku adkaysiga cunsuriyada hay'adeed iyo sarraynta caddaanka.
Waxaan tan ku aragnaa nidaamka ganacsiga adduunka. Dhaqaalaha la gumeystay ayaa halis weyn ugu jira in lagu xiro soo saarista alaabta ceeriin iyo alaabada tikniyoolajiyadda casriga ah - nooc ka mid ah gumeysiga.
Taasna waxaan ku aragnaa xiriirka awoodda adduunka.
Afrika labalaab bay noqotay. Marka hore, iyada oo bartilmaameed u ah mashruucii gumaysiga. Ta labaad, Wadamada Afrika ayaa ku yar matalaadda hay'adaha caalamiga ah ee la abuuray Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka hor, ka hor inta badankood aysan ku guuleysan xorriyadda.
Umadaha kor u soo kacay in ka badan toddobo sano ka hor ayaa diiday inay ka fekeraan dib-u-habeynta loo baahan yahay si loo beddelo xiriirka awoodda hay'adaha caalamiga ah. Halabuurka iyo xuquuqda codbixinta ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay iyo guddiyada nidaamka Bretton Woods ayaa tusaale u ah.
Sinaan la'aantu waxay ka bilaabmaysaa xagga sare: hay'adaha caalamiga ah. Wax ka qabashada sinaan la'aanta waa inay ku bilaabataa dib u habeyn iyaga.
Oo yeynaan iloobin il kale oo weyn oo sinnaan la'aan ka jirta adduunkeenna: millennia ee aabbe.
Waxaan ku nool nahay adduunyo raggu ku badan yahay oo leh dhaqan ragga ku badan.
Meel walba, haweenku way ka liitaan ragga, si fudud maxaa yeelay waa haween. Sinaan la’aan iyo takoorid ayaa caado ah. Rabshadaha ka dhanka ah haweenka, oo ay ku jiraan haweenku, waxay ku jiraan heerar faafa.
Iyo adduunka oo dhan, haweenku wali waa laga reebay jagooyinka sare ee dawladaha iyo guddiyada shirkadaha. Wax ka yar mid ka mid ah 10ten hoggaamiyeyaasha adduunka waa haweeney.
Sinaan la'aanta jinsiga ayaa waxyeeleyneysa qof walba maxaa yeelay waxay naga hor istaageysaa inaan ka faa'iideysano caqliga iyo khibrada aadanaha oo dhan.
Tani waa sababta, aniga oo ah haweeney sharaf leh, waxaan mudnaanta koowaad ka dhigay sinnaanta jinsiga, iyo sinnaanta jinsiga ayaa hadda dhab ka ah shaqooyinka ugu sarreeya ee Qaramada Midoobay. Waxaan kula dardaarmayaa hogaamiyaasha noocyadooda kala duwan inay sidaa oo kale sameeyaan. Waxaana ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in Siya Kolisi Koonfur Afrika uu yahay safiirkeena cusub ee caalamiga ah ee qaramada midoobay iyo midowga yurub ee loo yaqaan 'Spotlight initiative', isagoo ka qayb qaadanaya ragga kale la dagaalanka aafada aduunka ee ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha
Tobanaankii sano ee la soo dhaafay ayaa abuuray xiisado iyo isbeddello cusub.
Caalamiyaynta iyo isbadalka tikniyoolajiyaddu waxay kiciyeen guulo badan oo dakhli iyo barwaaqo ah.
In kabadan hal bilyan oo qof ayaa ka guuray saboolnimada ba'an.
Laakiin ballaarinta ganacsiga iyo horumarka tikniyoolajiyadda ayaa sidoo kale gacan ka gaystay isbeddel aan horay loo arag oo ku saabsan qaybinta dakhliga.
Intii u dhaxeysay 1980 iyo 2016, adduunka ugu qanisan 1 boqolkiiba waxay qabteen 27 boqolkiiba wadarta guud ee kororka dakhliga.
Shaqaalaha xirfad-yaqaanka ah waxay la kulmayaan weerar kaga imanaya teknoolojiyad cusub, otomatig, bad-soo-saarka wax soo saarka iyo baabi'inta ururada shaqaalaha.
Tanaasulka canshuuraha, ka fogaanshaha canshuuraha iyo la dhuumashada canshuuraha ayaa wali ah mid baahsan. Heerarka cashuurta shirkadaha ayaa hoos u dhacay.
Tani waxay hoos u dhigtay ilaha lagu maalgelin lahaa adeegyada yareyn kara sinaan la'aanta: ilaalinta bulshada, waxbarashada, daryeelka caafimaadka.
Jiilka cusub ee sinaan la'aantu waxay ka badan tahay dakhliga iyo maalka si loo koobo aqoonta iyo xirfadaha loo baahan yahay si loogu guuleysto adduunka maanta.
Kala duwanaanshaha qotada dheer wuxuu bilaabmaa dhalashada kahor, wuxuuna qeexaa nolosha - iyo dhimashada hore.
In ka badan 50 boqolkiiba 20-jirka ku jira waddammada aad ugu horumarsan aadanaha waxay ku jiraan tacliinta sare. Wadammada horumarka aadanaha hooseeya, tiradaasi waa boqolkiiba saddex.
Xitaa ka sii naxdin badan: qaar ka mid ah 17 boqolkiiba carruurta ku dhalatay 20 sano ka hor waddamada horumarka aadanaha uu hooseeyo mar hore ayay dhinteen.
Mustaqbalka, laba isbedel oo dhul gariir ayaa qaabeyn doona qarniga 21-aad: dhibaatada cimilada, iyo isbeddelka dhijitaalka. Labaduba way sii dheereyn karaan sinaan la'aanta xitaa sii dheer.
Qaar ka mid ah horumarka maanta ka jira xarumaha casriga ah iyo xarumaha hal-abuurka ayaa sababa walaac xoog leh.
Warshadaha tiknoolajiyadda ee ragga aad u badan ayaan kaliya ka maqnayn kalabar khibradda iyo aragtiyaha adduunka. Waxay sidoo kale adeegsaneysaa algorithms oo sii adkeyn kara jinsiga iyo midabtakoorka.
Kala qeybsanaanta dhijitaalka ah waxay xoojineysaa kala qeybsanaanta bulshada iyo dhaqaalaha, laga bilaabo akhris-qorista iyo daryeelka caafimaadka, min magaalo ilaa miyi, xanaanada caruurta ilaa kulleejada.
In 2019, qaar ka mid ah 87 boqolkiiba dadka ku nool dalalka horumaray isticmaalay internetka, marka la barbar dhigo kaliya 19 boqolkiiba dalalka ugu horumarsan.
Waxaan halis ugu jirnaa adduun laba xawaare leh.
Isla mar ahaantaana, marka la gaaro 2050, dardargelinta isbeddelka cimilada ayaa saameyn ku yeelan doonta malaayiin dad ah iyada oo loo marayo nafaqo-xumada, duumada iyo cudurrada kale, socdaalka, iyo dhacdooyinka cimilada ee daran.
Tani waxay ku abuureysaa hanjabaado culus sinnaanta jiilasha iyo cadaaladda. Dhallinyarada maanta ka mudaaharaadaya cimilada waxay ku sugan yihiin furimaha dagaalka ee ka dhanka ah sinnaan la'aanta.
Wadamada sida aadka ah ay u saameeyeen khalkhalka cimilada ayaa sameeyay uguyaraan wax ku biirinta kuleylka aduunka.
Dhaqaalaha cagaaran wuxuu noqon doonaa il cusub oo barwaaqo iyo shaqo. Laakiin yaanan ilaawin in dadka qaar ay waayi doonaan shaqooyinkooda, gaar ahaan rustbel-ka warshadaha kadib ee adduunkeena.
Taasina waa sababta aan ugu baaqeyno oo keliya waxqabadka cimilada, laakiin caddaaladda cimilada.
Hoggaamiyeyaasha siyaasaddu waa inay sare u qaadaan hamigooda, ganacsatadu waa inay sare u qaadaan himiladooda, dadkuna meel kasta oo ay joogaan waa inay codkooda kor u qaadaan. Waxaa jirta dariiq ka wanaagsan, waana inaan qaadnaa.
Saamaynta halista ah ee heerarka maanta ee sinnaan la'aantu way cadahay. Mararka qaarkood waxaa naloo sheegaa in kor u kaca…
Kalsoonidii lagu qabay hay'adaha iyo hogaamiyaasha ayaa sii burbureysa. Ka qeybgalka codbixinta ayaa hoos udhacay celcelis ahaan dunida oo dhan boqolkiiba 10 tan iyo bilowgii 1990-yadii.
Dadka dareema in la takoorayna waxay u nugul yihiin doodaha iyaga nasiibkooda ku eedeeya kuwa kale, gaar ahaan kuwa u muuqda ama u dhaqma si ka duwan.
Laakiin shicibka, wadaninimada, xagjirnimada, cunsuriyada iyo cayda ayaa kaliya abuuri doonta sinaan la’aan iyo kala qeybsanaan cusub oo ka dhex jirta bulshada dhexdeeda; u dhexeeya dalalka, u dhexeeya qowmiyadaha, u dhexeeya diimaha.
COVID-19 waa musiibo aadanaha. Laakiin sidoo kale waxay abuurtay fursad jiil.
Fursad dib loogu dhisi karo adduun siman oo waara.
Jawaabta laga bixinayo aafada, iyo qanacsanaanta baahsan ee ka horeysay, waa inay ku salaysnaataa Heshiis Bulsho Cusub iyo Heshiis Caalami ah oo abuuraya fursado loo siman yahay dhammaan, laguna ixtiraamo xuquuqda iyo xorriyadaha dhammaan.
Tani waa sida kaliya ee aan ku gaari karno yoolalka Ajendaha 2030 ee Hormarinta Waara, Heshiiska Paris iyo Ajendaha Waxqabadka ee Addis Ababa, heshiisyada si sax ah wax uga qabanaya fashilaadaha la kashifayo ugana faa'iideysanaya aafada.
Qandaraas Bulsho oo cusub ayaa u suurta gelin doonta dhalinyarada inay sharaf ku noolaadaan; hubin doona in haweenku yeeshaan rajooyin iyo fursado la mid ah tan ragga; wuxuuna ilaalin doonaa bukaanka, kuwa nugul, iyo dadka laga tirada badan yahay nooc kasta.
Ajendaha 2030 ee Hormarka Waara iyo Heshiiska Paris ayaa muujinaya wadada horay loo socon karo. 17-ka Ujeeddooyinka Horumarinta Joogtada ah waxay si sax ah wax uga qabanayaan guul-darrooyinka soo ifbaxaya ugana faa'iideysanaya masiibada.
Waxbarashada iyo tikniyoolajiyadda dijitaalka ahi waa inay ahaadaan laba awood-bixiyeyaal waaweyn iyo isle'eg.
Sidii uu yidhi Nelson Mandela, oo aan soo xigto, “Waxbarashadu waa hubka ugu awoodda badan ee aan u adeegsan karno beddelka adduunka.” Sida had iyo jeer ah, isagu wuxuu yidhi marka hore.
Tacliintu waa hubka ugu awoodda badan ee aan u adeegsan karno beddelka adduunka
Dowladaha waa inay mudnaanta siiyaan helitaanka isku midka ah, laga bilaabo waxbarashada hore ilaa waxbarashada nolosha oo dhan.
Cilmiga neerfaha wuxuu noo sheegayaa in waxbarashadda iskuulka ka hor ay bedesho nolosha shakhsiyaadka isla markaana faa iidooyin aad u badan u keento bulshada iyo bulshada.
Marka marka carruurta ugu taajirsan ay todobo jeer ka badan yihiin kuwa ugu saboolsan inay galaan dugsiga xannaanada, layaab malahan in sinnaan la'aantu ay udhaxeyso jiilka.
Si loo gaadhsiiyo waxbarasho tayo leh dhammaan, waxaan u baahanahay in ka badan laba jibaar kharashka waxbarashada ee waddamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexe marka la gaaro 2030 illaa $ 3 trillion sanadkii.
Qarni gudahood, dhammaan carruurta ku nool waddamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexe waxay heli karaan waxbarasho tayo leh oo heerar kasta leh.
Tani waa macquul. Kaliya waa inaan go'aansano inaan sameyno.
Iyo sida tikniyoolajiyadu u beddeleyso adduunkeenna, barashada xaqiiqooyinka iyo xirfadaha kuma filna. Dowladuhu waxay ubaahanyihiin inay mudnaanta siiyaan maalgalinta akhriska iyo kaabayaasha dhijitaalka ah.
Barashada sida wax loo barto, la qabsiga iyo qaadashada xirfadaha cusub ayaa muhiim noqon doona.
Kacaanka dhijitaalka ah iyo sirdoonka macmalka ah ayaa beddeli doona dabeecadda shaqada, iyo xiriirka ka dhexeeya shaqada, firaaqada iyo waxqabadyada kale, kuwaas oo qaarkood aan xitaa malayn karin maanta.
Khariidadda Wadashaqeynta Dijital, oo laga bilaabay Qaramada Midoobay bishii hore, waxay dhiirrigelisaa aragtida ah mid loo wada dhan yahay, mustaqbal dijitaal ah oo waara iyadoo la isku xirayo afarta bilyan ee soo hartay ee Internetka sannadka 2030-ka.
Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale daah furtay "Giga", oo ah mashruuc hami leh oo lagu doonayo in iskuul kasta oo adduunka ka mid ah laga helo khadka tooska ah.
Teknoolojiyadda ayaa dib u soo celin karta ka soo kabashada COVID-19 iyo ku guuleysiga Yoolalka Horumarka Waara.
Farqiga sii kordhaya ee kalsoonida ee u dhexeeya dadka, hay'adaha iyo hoggaamiyeyaasha ayaa dhammaanteen na hanjabaya.
Dadku waxay rabaan nidaamyo bulsho iyo dhaqaale oo u shaqeeya qof walba. Waxay rabaan in la ixtiraamo xuquuqdooda aadanaha iyo xorriyaadka aasaasiga ah. Waxay rabaan inay wax ka yiraahdaan go'aamada saameynaya noloshooda.
Heshiiska cusub ee bulsheed ee u dhexeeya dawladaha, shucuubta, bulshada rayidka ah, ganacsatada iyo kuwa kale oo badan waa in ay dhexgalaan shaqaalaynta, horumar waara iyo ilaalinta bulshada, oo ku dhisan xuquuq iyo fursado loo simanyahay dadka oo dhan.
Siyaasadaha suuqa shaqada, oo ay weheliso wadahadal wax ku ool ah oo u dhexeeya loo shaqeeyaha iyo wakiillada shaqaalaha, waxay hagaajin karaan mushaharka iyo xaaladaha shaqada.
Wakiillada shaqaalaha ayaa sidoo kale muhiim u ah maareynta caqabadaha ku horgudban shaqooyinka teknolojiyadda iyo isbeddelka qaabdhismeedka - oo ay ku jiraan u gudubka dhaqaalaha cagaaran.
Dhaqdhaqaaqa Shaqada wuxuu leeyahay taariikh lagu faani karo ee la dagaalanka sinaan la'aanta iyo ka shaqeynta xuquuqda iyo sharafta dadka oo dhan.
Is-dhexgalka tartiib-tartiibka ah ee qaybta aan rasmiga ahayn ee qaab-dhismeedka ilaalinta bulshada ayaa muhiim ah.
Adduunyada isbeddelaysa waxay u baahan tahay jiil cusub oo siyaasadaha ilaalinta bulshada leh shabagyo nabdoon oo cusub, oo ay ku jiraan Caymiska Caafimaadka Universal iyo suurtagalnimada Dakhliga aasaasiga ah ee aasaasiga ah.
Sameynta heerarka ugu yar ee ilaalinta bulshada, iyo dib u celinta maalgashiga daba-dheeraaday ee adeegyada bulshada oo ay kujiraan waxbarashada, daryeelka caafimaadka, iyo marin u helka internetka ayaa muhiim ah.
Laakiin tani kuma filna inay wax ka qabato sinnaan la'aanta xididdada u sii gashay.
Waxaan u baahanahay barnaamijyo ficil oo xaqiijin ah iyo siyaasado bartilmaameed ah si wax looga qabto oo wax looga qabto h….
Sinnaan la'aanta taariikheed ee jinsiga, midabka ama jinsiyadda, oo ay xoojiyeen caadooyinka bulshada, waxaa kaliya oo lagu rogi karaa dadaallada la beegsanayo.
Canshuuraha iyo dib-u-qeybinta siyaasadaha ayaa sidoo kale door ku leh Qandaraaska Cusub ee Bulshada. Qof walba - shaqsiyaadka iyo shirkadaha - waa inay bixiyaan qaybtooda caddaalad ah.
Wadamada qaarkood, waxaa jira meel canshuuraha lagu aqoonsan karo in dadka hodanka ah iyo kuwa xiriirka la leh ay si weyn uga faa'iideysteen gobolka, iyo muwaadiniintooda kale.
Dowladaha waa inay sidoo kale u wareejiyaan culeyska canshuuraha ee mushahar bixinta una wareejiyaan kaarboon.
Canshuuraha kaarboonka halkii dadku ka qaadi lahaa waxay kordhin doontaa wax soo saarka iyo shaqada, iyadoo yareyneysa qiiqa.
Waa inaan jebinnaa wareegga xun ee musuqmaasuqa, oo labadaba sabab iyo saameyn u leh sinnaan la'aanta. Musuqmaasuqu wuxuu yareeyaa oo khasaariyaa lacagaha loo heli karo ilaalinta bulshada; waxay wiiqaysaa xeerarka bulshada iyo ku dhaqanka sharciga.
La dagaalanka musuqmaasuqa waxay kuxirantahay isla xisaabtan. Dammaanadda ugu weyn ee xisaabtanku waa bulsho rayid ah oo firfircoon, oo ay ku jiraan warbaahin madax-bannaan, madax-bannaan iyo barnaamijyo baraha bulshada oo mas'uul ka ah oo dhiirrigeliya dood caafimaad qabta.
Si qandaraaskan cusub ee bulshada u noqdo mid suurtagal ah, waa inuu la socdaa heshiis caalami ah oo cusub.
Aan wajahno xaqiiqooyinka. Nidaamka siyaasadeed iyo dhaqaale ee adduunku ma keenayo badeecooyinka guud ee caalamiga ah ee muhiimka ah: caafimaadka bulshada, waxqabadka cimilada, horumar waara, nabad.
Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu guriga ku keenay kala-baxii xumaa ee u dhexeeyay danaha iyo danta guud; iyo farqiga u weyn ee ka jira qaab dhismeedka maamulka iyo qaab dhismeedka anshaxa.
Si loo daboolo nusqaamahaas, loona suurtageliyo Qandaraaska Cusub ee Bulshada, waxaan u baahanahay Heshiis Cusub oo Caalami ah: dib-u-qaybin awood, maal iyo fursado ah.
Qaab cusub oo loo maro maamulka adduunka waa inuu ku saleysnaadaa ka qaybgal buuxa, loo wada dhan yahay oo loo siman yahay ee hay'adaha adduunka.
Taas la'aanteed, waxaan wajihi karnaa xitaa sinnaan la'aan ballaaran iyo kala duwanaansho midnimo - sida kuwa aan maanta ku aragno jawaabta kala daadsan ee caalamiga ah ee COVID-19 faafa.
Wadamada horumaray waxaa si xoog leh loogu maalgashaday badbaadadooda si looga hortago aafada. Laakiin way ku guuldareysteen inay soo gudbiyaan taageerada loo baahan yahay si looga caawiyo dunida soo koraysa waqtiyadan khatarta ah.
Heshiis Caalami ah oo cusub, oo ku saleysan caalamiyeyn cadaalad ah, xuquuqda iyo sharafta qof kasta oo bini aadam ah, ku noolaanshaha dheelitirka dabeecadda, tixgelinta xuquuqda jiilalka soo socda, iyo guusha lagu cabiro aadanaha ee aan ahayn shuruudaha dhaqaalaha. habka ugu wanaagsan ee tan loo beddeli karo.
Nidaamka wadatashiga adduunka oo dhan illaa sanad-guuradii 75-aad ee Qaramada Midoobay wuxuu caddeeyay in dadku ay rabaan nidaam maamul oo caalami ah oo iyaga u fidiya.
Adduunweynaha soo koraya waa inay lahaadaan cod aad uga xoog badan go aan qaadashada adduunka.
Waxaan sidoo kale u baahanahay nidaam ganacsi oo dhinacyo badan leh oo dheellitiran oo awood u siinaya dalalka soo koraya inay kor u qaadaan silsiladaha qiimaha adduunka.
Waa in laga hortagaa qulqulka maaliyadeed ee sharci darrada ah, lacagta la dhaqay iyo lunsashada canshuuraha. Is-afgarad caalami ah oo lagu joojiyo meelaha canshuurta laga qaado ayaa muhiim ah.
Waa inaan ka wada shaqeyno sidii loo mideyn lahaa mabaadi'da horumarka waara ee go'aan qaadashada maaliyadeed. Suuqyada maaliyadeed waa inay noqdaan wada-hawlgalayaal buuxa oo u wareejinaya qulqulka kheyraadka ee ka tagaya bunni iyo cawl una beddelaya cagaar, waara iyo sinnaan.
Dib-u-habeynta qaabeynta deynta iyo helitaanka deyn la awoodi karo waa inay abuurtaa meel maaliyadeed si loogu wareejiyo maalgashiga isla jiho.
Nelson Mandela wuxuu yiri: "Caqabadaha jira waqtigeena… waa inaan dib ugu soo celino wacyiga dadkeena dareenka wadajirka bina aadamka, inaan aduunka joogno midba midka kale sababtuna tahay iyo inaan u marno kuwa kale."
Cudurka faafa ee COVID-19 ayaa sii xoojiyay farriintan si ka xoog badan sidii hore.
Waan iska leenahay.
Waan wada istaagnaa, ama waan kala tagnaa.
Maanta, banaanbaxyada loogu talagalay sinaanta jinsiyada… ololaha ka dhanka ah hadalada nacaybka… ee halganka dadka sheeganaya xuquuqdooda iyo u istaaga jiilalka mustaqbalka… waxaan aragnaa bilowga dhaqdhaqaaq cusub.
Dhaqdhaqaaqani wuxuu diidayaa sinaan la'aanta iyo kala qaybsanaanta, wuxuuna mideeyaa dhalinyarada, bulshada rayidka ah, ganacsiga gaarka loo leeyahay, magaalooyinka, gobolada iyo kuwa kale ee ka dambeeya siyaasadaha nabada, dhulkeena, cadaalada iyo xuquuqda aadanaha ee dhamaan. Durba isbeddel ayey sameyneysaa.
Hadda waxaa la joogaa xilligii hoggaamiyeyaasha caalamku ay go'aan ka gaari lahaayeen:
Miyaynu u gacan geli doonnaa fowdo, kala qaybsanaan iyo sinnaan la’aan?
Mise waxaan sixi doonnaa khaladaadkii hore oo waxaan horey ugu socon doonaa wadajir, danta guud?
Waxaan ku jirnaa qodob. Laakiin waxaan ognahay dhanka taariikhda aan ku soconno.
isku xirnaanta #corona
# sinaan la'aan
# cunsuriyada dhismaha
Manhajka Caalamiga ah oo leh Nuxurka Waxbarshada Nabadda Waa Baahida Saacadda (Hindiya)
Louisville, Barnaamijka Waxbarashada Nabadda ee Kentucky: Waxbaridda Dhallinyarada ee Maareynta Khilaafaadka iyada oo aan rabshad la samayn
Go’aanka cusub ee Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Waxbarashada ayaa la qaatay
June 27, 2017 Warar & Muuqaal, Siyaasadda 0
Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay wuxuu meel mariyay qaraar cusub oo ku saabsan xaquuqda waxbarashada iyadoo lagu saleynayo fadhigiisa 35-aad, kaasoo culeys saaraaya doorka hogaamineed ee UNESCO ee Himilada Horumarka Waara 4 [sii wad akhriska…]
June 8, 2020 Warar & Muuqaal 0
Xiriirintan Corona, Michelle Bachelet, Wakiilka Sare ee Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Aadanaha, waxay ku baaqeysaa ficil si wax looga qabto cunsuriyadda qaab-dhismeed ee ay shaaca ka qaadday COVID-19 taas oo si aan dheelitirneyn u saameysay dadka ka soo jeeda Afrika, iyo dadka laga tirada badan yahay, adduunka oo dhan. Cunsuriyaddu waa dhibaato caalami ah oo u baahan isbeddel nidaam oo ballaadhan. [sii wad akhriska…]
"Buugga Weyn: Bogagga Nabadda" (buugga adduunka ugu weyn!) Wuxuu laadlaadayaa Safarka Nabadda ee Caalamka
March 19, 2016 Warar & Muuqaal 1
"Buugga Weyn: Bogagga Nabadda," oo ah buug weyn oo dhererkiisu yahay 12 fuudh oo 10 dhudhun ballac ah, ayaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigi doonaa xarunta Qaramada Midoobay ee New York Axadda, Maarso 20, oo calaamadeyn doonta joogsiga ugu horreeya ee qorsheynta sanadka 2016 Socdaalka Dunida. "Buugga Weyn" wuxuu bilaabmay 2004, hadda miisaankiisu ka badan yahay tan (!) Waxaa ku jira tabarucaad ka yimid in ka badan 3,500 oo magac leh, oo ay ku jiraan 9/11 Jawaab bixiyaashii Koowaad, Nelson Mandela, Jimmy Carter iyo Dalai Lama.
"Waxaan ku faraxsanahay in Buugga Weyn la soo bandhigi doono inta lagu jiro Maalinta Caalamiga ee Farxadda Qaramada Midoobay," ayay tiri Betsy Sawyer, Aasaasaha Pages for Peace Foundation. “Xitaa waxaan aad ugu faraxsanahay rajada ah inaan buuggan cajiibka ah ka qaato adduunka oo dhan si aan u faafiyo farriintiisa awoodda badan ee waarta ee nabadda. Tani waxay ahayd riyadii carruurteenna in ka badan 10 sano. ” [sii wad akhriska…]